Paid Applications for free ( Giveaway ) ပုံမှန် Update - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Paid Applications for free ( Giveaway ) ပုံမှန် Update
ရလာဒ်များကိုကြည့်မည်: ယခုပိုစ့်အပေါ် သင်၏သဘောထား
အလွန်နှစ်သက်သဘောကျပါသည်။ 18 72.00%
အလယ်အလတ် သဘောကျပါသည်။624.00%
လုံးဝ,လုံးဝ သဘောမကျပါ။ 1 4.00%
14-02-2012, 06:26 PM
ကျွန်တော် ဒီတော့ပစ်မှာ Software ကုမ္ပဏီတွေက ပိုက်ဆံနဲ့ရောင်းတဲ့ Application တွေကို အခါအားလျော်စွာ အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် Free License ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Free Download ခွင့်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒါမျိုး Application တွေကို တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေမှ အဲဒါမျိုးတွေ တွေ့ခဲ့လို့ရှိယင်လည်း ဒီအောက်မှာ တင်ပေးကြပါခင်ဗျာ.... အခုလိုမျိုး ကုမ္ပဏီတွေက တရားဝင်ပေးတာတွေဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Pirated Application တွေလို Block လိုက်မှာတွေ၊ အင်တာနက်ကနေ Check မှာတွေ .... စတာတွေကို စိုးရိမ်စရာမလိုပဲ စိတ်သန့်သန့်၊ ကြောင့်ကြမှုကင်းကင်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Expired ဖြစ်သွားတဲ့ ပိုစ့်တွေကိုတော့ ဖျက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ... အဆင်ပြေကြပါစေ...
Last edited by bagothar85; 15-02-2012 at 06:35 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ခိုင်မြဲ, နီထွန်းဦး, ကျော်တိုး, အောင်ဗလ, နိုးတူး, arkaraung, azp09, g00gle, lu soe, mgwinhlaing, minthike, nandarnaing007@gmail.com, putty, thureinsoe, tu tu, zo
27-04-2012, 01:10 AM
ပြန်စာ - Paid Applications for free ( Giveaway ) ပုံမှန် Update
Facebook က Antivirus တွေ6months လိုင်စင် free ပေးနေပါတယ်။ Mcafee, Norton, Trend Micro, နောက် Mac အတွက် Sophos Antivirus၊ နောက်ဆုံးက Microsoft Security Essential ပါ။ MSE ကလွဲရင် ကျန်တာက ၆ လ လိုင်စင်ဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး။ Account တစ်ခုကို antivirus/internet security တစ်ခုပဲ ဒေါင်းလို့ ရပါမယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်
Last edited by g00gle; 27-04-2012 at 01:13 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, ကျော်တိုး, arkaraung, bagothar85, kyi zaw, KznT, mgwinhlaing, minthike, thureinsoe, tu tu, zo
22-05-2012, 02:01 PM
3 Free Full License Download EaseUS Bundle
EaseUS Todo Backup Workstation - Price: US$39.00
EaseUS Todo Backup Workstation is an advanced and reliable data backup & system disaster recovery software for business desktops and laptops. It offers maximized data protection and ease-of-use. With this cost-effective backup & recovery software, users can perform self-service backup operations like creating an exact disk image of your business workstation, backing up entire operating system, applications, and all data. In addition, you can get system up and recover files and folders in time, saving your time and work.
Giveaway: Download Full
EaseUS Partition Master Professional Edition - Price: US$19.95
EaseUS Data Recovery Wizard - Price: US$69.95
EaseUS Data Recovery Wizard isacomplete range of data recovery software for all Windows platforms and supports Undelete, Unformat from various file systems including FAT, FAT16, FAT32, NTFS on various storage media. Data Recovery Wizard ensures safe and precise file recovery against numerous threats like accidental file deletion and disk formatting and so on.
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, မိုးတိန်, ကျော်တိုး, g00gle, KznT, mgwinhlaing, minthike, yawnathan, zo
16-11-2012, 07:46 PM
Ashampoo Snap5- Free Full Version (Giveaway)
Ashampoo Snap5ဆိုတဲ့ Application ကတော့ နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်လိုက်စားနေကြတဲ့ သူတွေကိုတာ့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး... ဖိုရမ်တွေ၊ ဘလော့တွေမှာ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်လာတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿနာတွေ၊ Tutorials တွေကို အလွယ်တကူပဲ သိရှိနားလည်နိုင်အောင် ပုံလေးတွေနဲ့ Screen Shot(Picture , Video) လုပ်ပြီး ပြတဲ့နေရာမှာ အထူးအသုံးတည့်လှတဲ့ Application လေးပါပဲ... ကျွန်တော်တော့ တခြား Screen Shot Applications တွေထက် Ashampoo Snap ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ သုံးရတာလွယ်ပြီး၊ Features တွေလည်း စုံလို့ပါ... အခု Free ပေးတဲ့ Version ကတော့ Ashampoo Snap5ပါ။ နောက်ဆုံးထွက်ထားတာကတော့ Ashampoo Snap6ပါ။ ကျွန်တော်တို့လို သာမန်အသုံးပြုသူတွေ အတွက်ကတော့ အခုဗားရှင်း ၂-ခုဟာ ဘာမှ ကွာခြားမှု မရှိပါဘူး... အတူတူလိုပါပဲ... နည်းပညာနယ်မှာ ကျင်လည်လိုက်စားနေကြတဲ့သူတွေ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ Giveaway လေးပါပဲ... Free ရယူနိုင်ဖို့ကို အောက်မှာ ပြောပေးပါမယ်။
၁။ ပထမဦးဆုံး Free Giveaway ပေးတဲ့ ဒီနေရာကနေ Ashampoo Snap5ကို Download ပါ။ သူ့ Website က ဂျာမန်ဆိုက်ဆိုတော့ နားမလည်ယင် English ကို Translate လုပ်ပေါ့။
၂။ Download ပြီးသွားယင် တကယ်လို့ Ashampoo Account မရှိရင် ဒီနေရာကနေ Ashampoo Account အသစ်ဖွင့်ပါ။ ရှိယင်တော့ မလိုပါဘူး။ ပြီးယင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်အီးမေးလ်ကနေ Activate လုပ်ပေါ့။ ဒါတွေပြီးယင် ခုနက ဒေါင်းထားတာကို Install လုပ်ပါ။ သူ့ Installer က ဂျာမန်ဗားရှင်းဆိုတော့ တကယ်လို့ နားမလည်ယင် ပုံ-၁ ၊ ပုံ-၂ ၊ ပုံ-၃ ပုံတွေကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ Install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန် Serial key ဖြည့်ဖို့ Box တစ်ခုကျလာပြီး၊ Web page တစ်ခုလည်း ပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။
၃။ အဲဒီမှာ ခုနက Ashampoo Account Email ဖြည့်ပြီး (ပုံကြည့်ရန်) ၊ Serial key Request ကို နှိပ်၊ တစ်ဖက်မှာ Password နဲ့ Login လုပ်ပြီး (ပုံ) ၊ နောက်မှာ Serial Key ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် (ပုံ) ။ အဲဒီကီးကို Copy လုပ်ပြီး ကီးဖြည့်ရမဲ့ Box ထဲမှာ ဖြည့်ပြီး Activate လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Ashampoo Snap5ကို Full Version အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ (ပုံ)
၄။ နောက်တစ်ခု သိထားဖို့က ခုနက Serial Key အပါအဝင် နောက်ပိုင်း Ashampoo ရဲ့ Giveaway တွေ ရှိလာခဲ့ယင် အခုလို ရယူထားခဲ့တဲ့ Key တွေကို ကိုယ့် Ashampoo Account မှာ သိမ်းပေးထားပါတယ်။ နောက်လိုအပ်ယင် အဲဒီမှာ သွားပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ Giveaway ရဲ့ Installer မှ သုံးလို့ရမှာပါ။ တခြား Version တွေမှာ သုံးလို့ ရချင်မှရမှာပါ။ အဲဒီကီးတွေကို ကြည့်ဖို့ကတော့ Ashampoo Website ကို သွား၊ My Ashampoo ဆိုတာကနေ Loging ဝင်ပြီး ၊ My License Keys ဆိုတာမှာ ကြည့်လိုက်ယင် License Keys တွေ အကုန်လုံးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် (ပုံကြည့်ရန်)။ နောက်လိုအပ်ယင် ပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့။ အဆင်ပြေကြပါစေ ခင်ဗျာ...
Last edited by bagothar85; 17-11-2012 at 08:06 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, g00gle, tu tu
Windows update လုပ်ဆောင်ခြင်း komyo2010 Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော 8 28-02-2012 09:02 PM
NOD32 Antiviurs3ကို Offline Update လုပ်ရအောင် ကျော်ကိုထက် Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ 19 05-12-2011 01:48 PM
Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းများ KznT Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ 31 07-07-2011 03:53 PM
Window Update အကြောင်း အောင်ထက်ကျော် Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော908-02-2011 09:34 PM
Vista OS Install လုပ်ခြင်း poekaunglay87 Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော215-10-2008 12:41 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 08:27 AM